Ciidan gadoodsan oo la wareegay Xarun Wasaarad | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidan gadoodsan oo la wareegay Xarun Wasaarad
Askarta ayaa la sheegay inay ka cabanayaan xuquuq la'aan, waxayna Saraakiisha hogaaminaysa ku eedeeyay Madaxweyne Deni inuu lunsaday lacagtii loogu tala-galay Ciidamada amniga.
BOOSAASO, Soomaaliya - Cutubyo katirsan Ciidanka Puntland oo wata gaadiidka dagaalka, kuwaasoo u xilsaarnaa la-dagaallanka Maraakiibta Jariifka ah ee Xeebaha Maamulka, ayaa Maanta la wareegay xarun ay Wasaaradda Kalluumeysiga ee magaala xeebeedka Boosaaso.
Ciidanka gadoodka sameeyay ayaa go'doomiyay xarunta, iyagoo diiday inay kasoo baxaan Mas’uuliyiin ay kamid yihiin Wasiir ku xigeenka Kalluumeysiga iyo Agaasimaha guud ee Wasaaradda, sida Saraakiisha booliska u sheegeen Keydmedia Online.
0 Comments Topics: boosaaso ciidanka dowladda deni
Afartii billood ee lasoo dhaafay, Soomaaliya waxaa ka dhacay in ka badan 20 weerarro argagixiso iyo dilal ah oo ay geysatay Kooxda Al-Shabaab, oo ka faa’idaysanaysa habacsanaanta amni iyo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka, tani waa Warbixinta tifaftiraha Keydmedia Online ee Caasimadda.
Puntland oo ku adkaysanaysa go’aankeeda Shirka Garoowe
Warar 11 February 2021 17:26
Askari katirsan Ciidanka DF oo dil lagu xukumay
Warar 11 January 2021 13:17